Dagaalka qowmiyadaha ee Ethiopia oo ka daray iyo 100 Amxaaro ah oo la dilay | Warkii.com
Home warkii Dagaalka qowmiyadaha ee Ethiopia oo ka daray iyo 100 Amxaaro ah oo...
Dagaalka qowmiyadaha ee Ethiopia oo ka daray iyo 100 Amxaaro ah oo la dilay
Ugu yaraan 100 qof oo kasoo jeeda qowmiyada Amxaarada ayaa lagu dilay weerar maalin ka hor, 1-dii bishan November ay qaaday koox la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin Jabhadda hubeysan ee Oromo Liberation Army oo magaceeda loo soo gaabiyo (OLA).
Weerarkaas waxa uu ka dhacay tuulo lagu magacaabo Gawa-Qanqa oo hoos tagta degmada Guliso ee dhacda galbeedka gobolka Wellega Zone ee dalka Itoobiya.
Kooxdaas waxay weerarka qaaday maalin kadib markii ciidamada milteriga dowladda dhexe ee Itoobiya ay isaga bexeen aaggaas, iyagoo aan shaacin sababta bixitaankooda.
Dad ku sugan deegaanada dadkaas lagu laayey ayaa warbaahinta u sheegay in tobaneeyo rag, dumar iyo carruur isugu jira la dilay, hanti badan la dhacay, isla markaana ay kooxdu gubtay oo dab qabadsiiday wixii ay qaadi weysay.
“Weerarkan macno darrada ah ayaa ah kii ugu dambeeyay ee taxane dilal dalka ka dhaca, kaas oo xubno ka tirsan qowmiyadaha tirada yar si ula kac ah loola beegsaday. Xaqiiqda ah in dhacdadan foosha xun ay dhacday waxyar kadib markii ciidamada dowlada ay si lama filaan ah uga baxeen aaga duruufo aan la fahmi karin ayaa keenaya su’aalo ay tahay in laga jawaabo” waxaa sidaas yiri Deprose Muchena oo ah Agaasimaha Bariga iyo Koonfurta Afrika ee hay’adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International.
Sarkaalkaas ka tirsan Amnesty ayaa mas’uuliyiinta dowladda Itoobiya ka dalbaday inay baaraan wixii dhacay oo ay maxkamadeeyaan kuwa mas’uulka ka ahaa weerarkaas, weliba si cadaalad ah.
“Amnesty International waxay la hadashay qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarkii foosha xumaa ee ka badbaaday geerida iyagoo ku dhuumaaleystay keyn ku dhow. Waxay sheegeen in kooxda weerarka soo qaaday ay cadeeyeen inay yihiin OLA oo ay sheegeen inay ‘gacanta ku hayaan’ aagga ay ciidamada dowladdu baxeen 31-kii October” ayuu yiri Agaasime Deprose Muchena.
100-ka qof waxaa la sheegay in kooxdu isugu geysay inta aysan leyn xarun School oo deegaanka ku taalla, kadibna ay ku dhex dileen, badankoodna waxay ahaayeen dadkii aysan u suurta-gelin inay cagahooda ku baxsadaan, oo waxay u badnaayeen haween, carruur iyo dad waayeel ah.
Mid ka mid ah dadka ayaa u sheegay Amnesty International in la dilay seddax ka mid ah eheladiisa – aabihiis, walaashiis iyo xaaskiisa awoowgeed.
Mid kale wuxuu yiri, “Waxaan waayey walaalkey, dumaashidey iyo seddax caruur ah oo ay kujiraan adeer iyo ilma adeer. Meydadkooda waxaa laga dhex helay barxada iskuulka oo ay ka muuqdaan dhaawacyo rasaas ah.”
Ugu dambeyntii Deprose Muchena oo ah Agaasimaha Bariga iyo Koonfurta Afrika ee hey’adda Amnesty Internation oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa warbixintiisa ku yiri, “Dowladda Ethiopia waa inay xoojisaa dadaalkeeda si loo joojiyo weerarrada hubeysan ee lagu hayo kooxaha laga tirada badan yahay, loona ilaaliyo naftooda, loogana hor-tago burburka guryahooda, kaliya ma ahan Oromiya, laakiin guud ahaan dalka xaaladaasi way ka jirtaa.
Previous articleWasiirka Warfaafinta DF oo si yaab leh ugu jawaabay dalabkii Faysal Cali Waraabe
Next articleDAAWO Sawirro: Golaha wasiirada oo shir xasaasi ah ku leh garoonka Aadan Cadde
Ergeyga gaarka ah ee xoghayaha Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swan ayaa ka hadlay arrimo ku aadan xaaladda Somalia iyo doorashooyinka, kadib...
Muxuu xildhibaan MAHAD SALAAD ka yiri ceyrinta DF Somalia ee safiirka...
Dowladda UK oo war kasoo saartay muranka doorashada Soomaaliya, farriinna u...
50 arday oo Soomaali ah oo ku go’doonsan gobolka Tigray
Ciidamada Itoobiya oo magaalooyin hor leh kala wareegay TPLF